स्कुलको हेडमास्टर बनेका गौतम जब कलेजको चौकिदार बने — Motivatenews.Com
काठमाडौं – नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम प्राय चर्चाको केन्द्रमा रहिरन्छन् । उनको चर्चा कहिले समर्थनमा हुन्छ भने कहिले विरोधमा । कोही कोहीले त बामदेवलाई ‘चौतारामा राखिएको मादल’ भनेर पनि विश्लेषण गरे, जुन जसले भेटायो त्यसैले बजाउँछ ।
पछिल्लो समय उनलाई पार्टीको अध्यक्षद्वय केपी सर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल पचण्डले आफू अनुकुल प्रयोग गर्दै आएको बारेमा धेरैले उनको आलोचना गरेका थिए । आफ्नो अडानमा बस्न नसकेर सबैको गोटी बनेको उनीमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ । उनको एउटा सिद्धान्त छ, ‘नाम होस या बदनाम होस् तर गुमनाम नहोस् ।’ उनी संधैभरी चर्चाको केन्द्रमा रहन चाहान्छन् । कसैले राम्रो भनेर छापोस् या नराम्रो भनेर छापोस् तर पत्रिकामा उनको फोटो छापिन पर्छ ।
उनी जिन्दगीमा कहिल्यौं निरास नहुने नेता हुन । उनी आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही वा जे गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्यो त्यो कदम चाल्न कहिल्यौं हिच्किदाउँदैनन् । एउटा सरकारी स्कुलको प्राचार्य भइसकेका उनी राजनीतिमा सक्रिय हुनका लागि कलेजको चौकिदार हुनसमेत तयार भएका थिए ।
हामी भएको भए सुख्खा खालको राजनीतिका लागि हुँदा खाँदाको जारी खाएर दुख गर्न तयार हुने थिएनौं । उनको यही संघर्षका कारण उनी पटक पटक उपप्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्री बन्न सफल भएका छन । लामो त्याग र बलिदान पछि उनको यो कदको राजनीतिक उचाँई बनेको हो । के बामदेवको राजनीतिक इतिहास छैन त ? के उनी टुपाबाट पलाएका नेता हुन ? उनको आफ्नो अडान छैन ? यो लेखमा यी र यस्ता धेरै प्रश्नहरुको जवाफ दिने प्रयास गरेका छौं ।
बामदेव गौतम जन्म प्युठानको दाखाक्वाडीमा वि.स.२००५ साल असार २६ गते भएको हो । गौतमका हजुरबा सामन्त थिए, पिता धनी किसानमा झरे । उनीचाहिँ आफूलाई मध्यम वर्गको भन्न रुचाउँछन् ।
भारतबाट फर्केपछि गौतमको बसाइ बागलुङको भीमगिठ्ठेमा भयो । बाग्लुङमै हुँदा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बने । असारे प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोविन्द केकेले उनलाई पार्टी सदस्यता दिएका हुन् ।
उनी फेरि प्युठान आए । मुक्ति हाइस्कुलमै ९ महिना पढेर एसएलसी दिए र उत्तीर्ण गरे ।
प्युठानमा कम्युनिष्ट पार्टीसँग सम्पर्क नभएपछि खर्चको जोहो गरेर भारतको मुम्बईमा पुगे । त्यहाँ जवलपुरमा १० दिनसम्म एउटा पसलमा काम गरे । त्यसपछि नेपालगञ्ज हुँदै सुर्खेत पुगे । त्यहाँस्थित रजेना प्राविको प्रअ (हेडमास्टर) बने । त्यहाँ पनि धेरै समय टिकेनन् र विद्रोह गरेर बर्दियातिर लागे ।
गौतमको भूमिगत राजनीतिको औपचारिक यात्रा पाल्पाबाट सुरु भयो । तर, एक महिनापछि नै उनी रुपन्देही फिर्ता भए र सालझण्डी क्षेत्रमा खटिए । जिल्ला कमिटीमा उक्लिए ।
पञ्चालतकालमा गौतमले रुपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुको इञ्चार्ज भएर काम गरे । २०२७ सालतिर किसान आन्दोलन चर्किँदा उनी सोही क्षेत्रमा कार्यरत थिए । ०२९ सालपछि कार्यकर्ताहरुको भागाभाग, पलायन र विभाजन सुरु भयो । पुष्पलालको पार्टीभित्र विद्रोह भयो । ०३० सालपछि मुक्ति मोर्चा बन्यो ।
पुष्पलाल र तुल्सीलालवीच अन्तरविरोध चर्कियो । उनी को–अर्डिनेशन केन्द्रसँग नजिकिन थाले । सोहीबेला उनी पक्राउ परे र दुई वर्षजति जेल बसे । जेलभित्रैबाट उनले कोअर्डिनेसन केन्द्र तीनचोटि सदस्यता नवीकरण गरे । यो समूहलाई झापा विद्रोहवाला समूहका रुपमा चिनिन्थ्यो । २०३५ सालमा यो माले भयो र पछि एमाले भयो ।
जेलबाट निस्केपछि वामदेव गौतम नेकपा (माले) को सम्पर्कमा पुगे । सुरुमा गण्डकी–धौलागिरीको इञ्चार्ज बने । एक समय सुदुरपश्चिमको पनि इञ्चार्ज बने ।
वामदेव ०४६ साल भदौको चौथो महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बने । ०४६ सालको जनआन्दोलनका बेला मध्यपश्चिमबाट नेतृत्व गरे । र, ०४७ बैशाख ९ गतेदेखि खुल्ला राजनीतिमा आए ।
माले र मार्क्सवादीवीच एकता भएर एमाले बन्दा संस्थापक केन्द्रीय सदस्य बनेका गौतम ०४९ को पाँचौं महाधिवेशनबाट पोलिटब्यूरो सदस्य बने । ०५१ सालमा एमाले सरकारमा गएका बेला उपमहासचिव बनेर सिंगो पार्टी हाँक्ने काम गरे ।
तर, एमाले ९ महिने सरकारबाट बाहिरिएपछि ओली समूहको दबावमा गौतमको उपमहासचिव पद खारेज भयो । त्यसबेला पार्टीभित्र वामदेवको लोकप्रियता बढेकाले ओली पक्षले अपमानित ढंगबाट गलहत्याएको गुनासो गौतमले निटस्थहरुसँग गर्दै आएका छन् । ओली समूहले उपमहासचिव पद अबैधानिक भएको बताएको थियो ।
२०५४ सालसम्म आइपुग्दा पार्टीभित्र वामदेव गौतम र केपी ओलीपक्षवीच दुरी बढ्दै गयो । पार्टीभित्र संस्थापन पक्ष र सीपी मैनाली पक्षवीच अन्तरसंघर्ष चर्किइरहेकै थियो । जबज पक्षमै भए पनि ओली समूहको लखेटाइमा परेका वामदेवले आफू जबजको पक्षधर हुँदाहुँदै पनि नौलो जनवादी धारका सीपी मैनालीलाई साथमा लिएर नेकपा माले बनाए । ०५६ को चुनावमा मालेले शून्य सीट हात पार्‍यो । ०५८ सालमा वामदेव पुनः एमालेमै फर्किए ।
सूत्रहरुका अनुसार त्यसबेला वामदेवलाई एमालेमा भित्र्याउन केपी ओली तयार थिएनन् । तर, तत्कालीन महासचिव माधव नेपालको अगुवाईमा गौतम समूह मातृपार्टीमा फर्कियो ।
एमालेमा आएपछि गौतमले माओवादीलाई शन्ति प्रक्रियामा ल्याउन भूमिका खेले । त्यसो गर्दा ओली पक्षले उनलाई माओवादी परस्त भन्दै कडा आलोचना गर्‍यो ।
आफूले ०५४ सालमा ओलीबाट धोका पाए पनि अन्ततः नवौं महाधिवेशनमा वामदेव गौतमले केपी ओलीलाई सघाएर अध्यक्षमा जिताए । संसदीय दलमा पनि झलनाथ खनाललाई हराएर ओलीलाई जिताउन वामदेवले निर्णायक भूमिका खेले ।
यसको साटो ओलीले संसदीय दलको नेता बनाउन वामदेवलाई दिएको वचन पूरा नगरेकोमा गौतमले चित्त दुःखाउँदै आएका छन् । त्यतिमात्रै होइन, बर्दियामा आफूले चुनाव हार्नुमा पनि अन्तरघातले काम गरेको गौतमको दाबी रहँदै आएको छ ।
आखिर, जति नै विरोधाभासापूर्ण सम्बन्ध रहेता पनि अहिले फेरि गौतम र ओलीवीच डिनर मिटिङहरु चल्न थालेका छन् । अनलाइनखवरको सहयोगमा ।
२०७७ साउन १९ गते प्रकाशित